Wukuqhatha okwenziwa ngabaNtwana
MHLELI: Ngithi ake ngisike elijikayo mayelana nempikiswano ekhona endlunkulu, ngizoqondisa ngoMntwana uThembi noMntwana uMbonisi.
Ngicela ukubakhumbuza ukuthi iSilo uMisizulu ngowesizwe, akakhethwa ngenxa yokuthi iNdlovukazi uMaDlamini yalotsholelwa ukuthi isizalele sona. Manje osekusikhathaza wukuthi iSilo esikhotheme sahamba sishiye iSilo uMisizulu kodwa bona sebenza izinkinga ngalokho. Kungani besikhethisa manje? Angisiboni isidingo sokuphakamisa amagama ngoba abalotsholwanga yisizwe onina balaba abaphakanyiswayo.
ISilo esikhotheme sihambe ngawo amagama esizwe, sakhetha kuyo indlovukazi. AbaNtwana, uMbonisi noThembi, sebeveza ukungayithandi indlu kaKhangelamankengane, okukhomba ukuthi nangesikhathi iSilo sikhona babenonele ngaphakathi okwendlanzi.
Thina njengesizwe ngabe siyakuqonda ukube lokhu bakuphakamise iSilo sisekhona, ukuthi abahambisani nakho. Okunye okungididayo ngabo ukuthi bakhwela bayadilika kuMntwana waKwaPhindangene kodwa uma ngabe uhluzile ekhanda, uyakuqonda ukuthi uhambisana neSilo. Awokugcina ami athi ngimangazwa yindlela abaphakamisa ngayo amagama alabo abangamiswanga, baqonde ukuqhatha.
Namanje bengingajabula uma bebengasho ukuthi kungani bengahambiselani ne nesinqumo seSilo esikhotheme.